I-Treehouse@TreeTops Farm - I-Airbnb
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSteve & Deby
USteve & Deby yi-Superhost
Indawo entle, ekumgangatho ophakamileyo westudiyo ekwiimayile ezi-1 ukusuka e-Highfields, iimayile nje ezi-3 ngqo ukuya edolophini e-Aiken, kwiivenkile zokutyela, kwiindawo zokutyela kunye nemisitho yamahashe. Imizuzu eli-15 ukuya eWindsor, imizuzu engama-30 ukuya kuAugusta kunye neeMasters.
Iyafumaneka kwirenti yexesha elifutshane.
Izixhobo ezitsha zombane, ezifihlakeleyo & zabucala kwi-9+ yeehektare; ulala 2. I-DIRECTV ene-HBO & ne-WIFI, ukufikelela kwi-swimming pool & nemithi yokuhamba / yokukhwela / ukuqhuba. Iivenkile ezi-2 ezineendwendwe ezifumanekayo ixesha elifutshane kunye nefulethi.
Yonwabela ikofu yasekuseni okanye iwayini yangokuhlwa phantsi komthi ongasemva kwendlu ngelixa ubukele amahashe esitya kwiindawo zabo zokuhlala okanye amaxhama abaleka emahlathini. Nangona siyimizuzu embalwa kuyo yonke into uya kuziva ngathi uphakathi kwehlathi. Unokuhamba ngeendlela ezijikelezileyo okanye uphumle ngasechibini. Ifama ye-TreeTops ichazwe njenge "gem" kwaye injalo ngokwenene.
Akukho nto ifana nokuba nesithuba esikufutshane kuzo zonke iindawo ozifunayo kufutshane kodwa inika ubumfihlo bokuba ngaphandle kwehlathi. Iihektare ezinemithi ezisithoba zingqongwe ngamanye amaninzi. Ungazibona ngenene iinkwenkwezi ebusuku kwaye ngorhatya ixhama libonisa isidlo sangokuhlwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Steve & Deby